Manchester United oo garoonkeeda Old Trafford guul xasilooni leh kaga gaartay kooxda Burnley… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye April 18, 2021
(Manchester) 18 Abriil 2021. Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford guul xasilooni leh kaga gaartay kooxda Burnley, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, ciyaar ka tirsaneyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee dheesha ayeey labada kooxood Manchester United iyo Burnley ku kala nasteen bar-bardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 48-aad Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 1-0 ka dhigay Mason Greenwood, waxaana caawinta goolkan lahaa Marcus Rashford.
58 daqiiqo kooxda kubadda cagta Burnley ayaa dhalisay goolka bar-bardhaca waxaana 1-1 ka dhigay James Tarkowski oo caawin ka helay saaxiibkiis Ashley Westwood.
Daqiiqadii 84-aad Manchester United ayaa markale hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 2-1 ka dhigay Mason Greenwood oo caawin ka helay khadka dhexe reer France ee Paul Pogba.
90+3 Manchester United ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta waxaana 3-1 ka dhigay Edinson Cavani oo caawin ka helay saaxiibkiis Donny van de Beek.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-1 ay kaga adkaatay Manchester United kooxda Burnley oo ku soo booqatay garoonka Old Trafford, Red Devils ayaa wali jadwalka kala sareynta kaga jirta booska labaad waxayna leedahay 66 dhibcood.